ဂေဇက်ရွာရဲ့သီချင်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Entertainment » ဂေဇက်ရွာရဲ့သီချင်း
Posted by Thuyazaw on Mar 20, 2012 in Entertainment, Music | 31 comments
၁းနွယ်ပင် မင်းသမီးလေးကို…… လိုချင် တပ်မက်မောသူ ….. သူရ မင်းသားလေးနဲ့ ယှဉ်ပြိုင် မိတိုက်စိုးဟာ……
မေဇော်ဟန်ကို ခိုးပြေးသွားတဲ့ အသည်းတစ်ခြမ်းနဲ့လူသား…… စာနာပါတယ် မမဆူးရဲ့ နှလုံးသားဝိဥာာဉ်အား
Rap: ကျွန်မ ဖင်စိပ်တာ အဒူတဲ့လဲ ကျွန်မဖင်စိပ်တာ အဒူတဲ့လဲ
Rose ပဲ Rose ပဲ Rose ပဲ
ဒဿဖက်တီး အချစ်ရှုံးသမား အသဲကွဲတယ်လို့ အခိုင်ကပြောတယ်…….. ဒဿဖက်တီး အချစ်ရှုံးသမား
အသဲကွဲဘူးတာ ဘာဆန်းလို့လဲ……….. ဘယ်သူကပြောလဲ…..ပြောလဲ ပြောလဲ….. အခိုင်ကပြောတယ်…..
ဘာဒဲ့……. အို…. ဘာဒဲ့……… ကမ်းဝေး….. ကမ်းဝေး…….
CHO : (နာဇီပါတီ ခိုးစားသွားတဲ့ အရူးမ မုန့်ကိုများ………… လိုချင်ပါသည် တသသပြောတဲ့
ထွန်းဝင်းလတ်ကိုဗျာ…… ချာတူးလန်……… သူကြီးရဲ့သမီး……….. ချာတူးလန် သူကြီးရဲ့သမီး…….)
ဤသီချင်းထဲတွင် မပါဝင်သေးသည့် ရွာသူ/ရွာသားများအတွက် သီချင်းများ စဉ်းစားနေပါသည်ခင်ဗျား………….. ပါဝင်သည့်သူများမှလည်း နာမည်များ သုံးမိသည့်အတွက် ခွေးလွှတ်ပေးပါရန် ဤပို့စ်လေးမှ တောင်းပန်အပ်ပါသည်ခင်ညား…………….
အော် တူရနှယ်ခက်ရချေရဲ့ နာကပဲ သူများအတင်းလှည့်ပြောနေတာကျနေတာပဲ …. ကိုဖက်က ခေါင်း၁၀ လုံးဘီလူးပေ့ါနော် …. ဘီလူးဆိုနာကစိတ်ဝင်စားတယ်ဟ
မခိုင်က ဘီလူးစိတ်ဝင်စားတယ်တဲ့လား … အရင်က ရွာထဲမှာ .. မန်နေဂျာ ကိုဘီလူးကြီးရှိတယ် … သူလည်း တိုင်ပတ်ပြေးရင်း .. နိုင်ငံခြားရောက်နေလို့ .. ရွာထဲမ၀င်ဖြစ်တော့ဘူး .. မခိုင်စိတ်ဝင်စားတယ်ဆို .. ပြေးရောက်လာနေဦးမယ် .. အဟိ ..
အော်ကိုရီးယားမင်းသားလေး အဆိုတော်သရုပ်ဆောင် ကင်သပိတ်ရောင်
ခွေးလွှတ်ပါတယ် သားရယ်… ငါသားလေး အဖြစ်က သနားစရာပါလားဟယ်.. မထင်ရဘူး ယဉ်ယဉ်လေး နော်…
တော်ကြာ ကားပေါ်ရောက်မှ မင်းအုပ်စိုးလိုလုပ်ရင် ဒုက္ခ
နားပိတ်ထားပါတယ် တူရ ဆက်ဆိုပါ ဆက်ဆိုပါ အားပေးနေပါတယ်
ကိုရီးယား မင်းသားခြော ကင်သပိတ်ယောင် က သီချင်းလည်း စပ်တတ်တယ်လား..
အသားရောင်က ဖြူဖြူကျော်သိန်းနဲ့ အမွှာညီမ ဆိုလား ကြားမိတယ်။ ဟုတ်လားတော့ မသိဘူးနော်.. ကောလဟာလ ဆိုတာ ဒါမျိုးတွေလည်း ရှိတတ်တယ် ဆိုတော့ သိပ်တော့ မယုံပါဘူး။
ဒါနဲ့ စကားမစပ် ဘာလို့ ကင်သပိတ်ယောင် လို့ နာမည် ရတာလဲဟင်..
မိတိုက်က ပြောတော့ သပိတ်ယောင် ထ နေလို့တဲ့..
ရွာသားတွေ ကို မီးဒုတ် အော်တောင်းတာ များလို့ ကင်ပြီးသား ဖြစ်လို့ ကင်သပိတ်ယောင် ဖြစ်သွားတယ် လို့ ကြားတာပဲနော်.. ဟုတ်မဟုတ် မသေချာလို မေးကြည့်တာ.. စိတ်မဆိုးရဘူးနော်။
စိတ်ဆိုးရင် ပိုရုပ်ဆိုသွားလိမ့်မယ် သိလား.. အလှူကျရင် မီးသွေးအိတ်နဲ့ မှားပြီး ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ မှားပြီး အလှူခဲ့ မိနေကြအုန်းမယ်။ ခစ်ခစ်
သူငယ်တော်ဆူးကတော့ လုပ်ချလိုက်ပန်ပီ…………. ညိုချောပါဆိုတာလဲ မရ ………. မဲတာကို မြင်ဘူးအောင်တော့ ပြမှရတော့မယ်……… အာဟိ
ဒီထဲမှာ မေဇော်ဟန်နာမည်နဲ့ ၀င်ထားတာရှိလို့လား သူရဇော်ရဲ့…
မေဇော်ဟန်သည် သီချင်းစာသားနှင့် ကိုက်ညီအောင် ရေးရခြင်းဖြစ်ပါသည်ခင်ည….. မအိတုံပါခင်ည
အစ်မ မနောကလည်း .. အူလည်လည်လာလုပ်ပြန်ပြီ …
သိရဲ့ သားနဲ့ .. ငြိမ်နေတာ မဟုတ်ဘူး ..
သက်သက် ပွအောင် ဖွချင်တာများ … ဇာတိကတော့ .. တကယ်ပြတယ် … ။ ဟွန်း
တေးရေးနဲ့ အဆိုချော် …. ကင်သပိတ်ရောင်ကလည်း … ရွဲ့ မေးတာ .. မေးမှန်း မသိဘူး … အတင်းကြီးပဲ .. ဖြေရှင်းချက်တွေထုတ်နေတယ် … ဟိုက သက်သက်ဖွတာ … ။ သိလည်း သိပဲနဲ့
ဟဲ့ ငါကဘယ်သူ့ဖင်စိတ် ရမှာလဲ။ ဒွတ်ခ ဒွတ်ခ။ ငါ့မှာ အေးအေးမနေရဘူး။
မေဇော်ဟန်ကို ခိုးပြောသွားတာကတော့ ykko ကြေးအိုးပဲ။
သီချင်းဆက်တာတော်မှာပေါ့သူက သုဝဏကွင်း နားက သင်းတိုက်မီးပွိုင့်မှာ ရွှေတိုက်ကို ကတွင်းခွင်ပြီးလုပ်စားလာတာ သက်တမ်းရင့်နေပြီ။ နာကစတာ စိတ်ဆိုးလား ………………..???
တူရနင့်အသံ ကောင်းတယ် နောက်ထပ်မဆိုနဲ့ နင့််ကိုအားပေးတယ်ရော့……. ဒေါင် (ခွက်ထဲ ပိုက်ဆံ အကြွေကျသံ)
မိတိုက်မကို တူရငှားသွားပြန်ပြီလား ဟိုနေ့က ကိုဖက်နဲ့လေ မီးပွိုင့်မှာ ကိုဖက်တောင် အဲဒါလေးကရတဲ့ ပိုက်ဆံနဲ့တို့ကိုလိုက်ကျွေးသေး …. မမအုံကလည်းကပ်စေးနှဲတာ အကြွေထည့်ပေးရတယ်လို့ ရော့…ဘုတ် (၅၀၀၀ တန် အထပ်လိုက်ထည့်သံ)
အမယ် ငါးထောင်တန်အထပ်လိုက်တောင် ဖမ်းထည့်လိုက်သေး……..ဟိုနေ့ကပဲ သူမရှိဘူးဆိုလို့ ၅၀ တန်လေးရွက်ချေးထားတာကို ဟွန်း…………..
ဟဲ့ မိတူရ ငါ ၅ထောင်တန်ထည့်တာဆန်းသလား ငါလိုသဌေးမက သူများကိုဆီကချေးစရာလား ငါနင့်ကိုပြောပြီသားပဲ နင်တောင်းစားရင် ငါ ၅ထောင်တန်ပဲထည့်မယ်လို့ ငါကင့ါစကားငါတာဝန် ယူနိုင်ပါအေ့ … ၅၀ တန်လေးရွက်ချေးတာမဟုတ်ဘူး အကြွေလဲတာအေ့ …. ၀ူး …အာပေါက်လိုက်တာ
တို တားစို့ ကြီး ငိုတော့မယ်နော် ဗြဲ
တူရ နဲ့ဆို ဘယ်နျစ်ယောက်ချိတွားဘီရဲလို့..ဒီသီချင်းဆိုတာ..
ဂျာ လေးလေး သားသား ကော်ပီကူးတာဟုတ်ဘူးနော်………..
မိုက်တယ်။ ကွက်တိပဲ။ သီချင်းသံစဉ်နဲ့နာမည်တွေပြောပါတယ်။ ဂွတ်ထဂွတ်ထ။
ချာတူးလန်က သဂျီးသမီး ဆိုပါကလား 8O
သူရဇော်က ကပလိမလေးမြင်သွားတော့ ကြေကွဲနေတာထင်တယ်
အာဂမှာ ဒါးရှည်ကြီးရှိတယ်တဲ့၊လွယ်ထားတဲ့ပုံတောင် ရိုက်ပြအုံးမလို့တဲ့။
ဒုံ တုံ တုံ…….ဒုံတုံတုံ…….
ဂလုချက် ထဲကလူတွေ စု သောင်းဂျန်းနေဒယ်ပေါ့ ….ဟုတ်စ..
ကိုဇော် ကျနော်ခိုးစားတာမဟုတ်ဘူးလေ ကြည်ကြည်ဖြူဖြူပါခဗျ
ကောရပ်(စ) အပိုဒ်ကို အကြိုက်ဆုံးဗျာ….
ကိုသူရရဲ့ .. ဥာဏ်ပြေးပုံကိုတော့ မချီးကျူးပဲ မနေနိုင်တော့ဘူး … ။
ပို့စ်အနေနဲ့ … ရေးချလိုက်တာ ဒီသီချင်းတစ်ပုဒ်ပဲဆိုပေမယ့် … ရွာဇရပ်ထဲ … ရေးနေတာတော့ .. တစ်ပုဒ်ပြီး တစ်ပုဒ်ပါပဲ … ။ အေသင်ချိုဆွေ သီချင်းတွေများ … ကုန်ပါရောလား … ။
ပျော်စရာလည်းကောင်း ၊ ရယ်စရာလည်းကောင်းပြီး .. သီ ချင်းတစ်ပုဒ်လုံး .. မနားတမ်းဖတ်လို့ မနားတမ်းရယ်လိုက်ရပါတယ် … အားပေးပါတယ် … ဆက်ရေးပါဗျို့ … ။
ကိုသူရ ဆော် ဆိုတော့ တေးရေးက မိန်းကလေးပေါ့နော် ကိုသူရ ကရော ခဗျကို ကျနော့်လို ခိုးစားတာပဲလား
သားစိုးက ဘယ်တော့မှာသီချင်မရေးတော့ဘူးတဲ့ ရွှာသူကြီးရေ…….